ओली सरकारमा हुँदा नै भएका उपलब्धी पनि गुमेः डा. केसी – Health Post Nepal
२०७७ असोज ९ गते १७:१५
चिकित्सा शिक्षा सुधार र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले ओली सरकारमा हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएका उपलब्धी पनि गुम्दै गएको बताए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शय्याबाट अनशनको १२ औं दिनमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले ओलीले आफू सरकारमा हुँदा जनताका लागि उठेका समस्या समाधानभन्दा पनि दम्भ देखाएर दबाउन खोजेको बताए।
‘ओली सरकारमै हुँदा सत्याग्रहमा बसेको यो पाँचौपटक हो, उहाँ सरकारमा हुँदा हामीले अघिल्ला सरकारहरुबाट पाएका उपलब्धि पनि गुमाउनुपरेको छ,’ भिडियो सार्वजनिक गर्दै डा. केसीले भने।
उनले सरकारले जनताका लागि राखिएका मागहरु पूरा गर्न वार्ताका लागि आए छलफल गर्न सकिने तर दम्भ देखाएर अनशन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले सबै नेपालीहरुको गुणस्तरीय निःशुल्क, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र शुसासनका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु आफूहरुले मुद्दा उठाइदिएको बताए।
‘जनताबाट निर्वाचित भएर जनताकै करबाट तलबभत्ता खाने उहाँहरुले नै यस्ता कामहरु पूरा गर्नुपर्ने हो, तर हामी अभियान्ताहरुले सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपरेको छ,’ डा.केसीले भने, ‘तर, ओलीजी त जनता भन्दा पनि दलाल र माफियाहरुकै पक्षमा ऐनहरु ल्याउनमा उद्दत हुनुहुन्छ।’
उनले आफूले राखेका मागहरु साधारण भएकाले सरकारले चाहेमा पूरा गर्नसक्ने बताए। करिब ८ मिनेट लामो भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारले गर्नै नसक्ने माग कुनै राखेका छैनौं, तर यसअघि भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न किन सरकारले रोकिरहेछ। नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व होइन र?’
यस्तै, आफूले उठाएको सुशासनको मुद्दा पनि सरकारले चाहेमा पूरा गर्नसक्ने बताए। तर, सरकार आफैं भ्रष्टाचार लिप्त भएकाले कारबाही गर्न नचाहेको डा. केसीको भनाइ छ।
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एक सरकारी मेडिकल कलेज, विगतमा स्थापना भएका सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा आवश्यकताअनुसारका जनशुक्ति पूर्ति र माथिल्लो तहको अध्यापनका लाथि अनुमित दिन रोक्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।
उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि अनुमति रोकिनुले ओली आफूलाई निजी लगानीकर्ताको पक्षमा उभ्याएको प्रस्ट हुने बताए।
‘स्थापना भएको ८ वर्षसम्म त्यो कार्यक्रम लागू भएको छैन। त्यसका लागि सत्याग्रह पनि बसेँ। त्यहाँ प्रहरी लगाएर दमन गरियो। अरु प्रदेशको पनि सुरु हुन दिइएको छैन,’ उनले भने।
यस्तै, डडेलधुरा वा डोटीमध्ये एकमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्ने सम्झौता भइसकेको तर प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए। उनले ओलीको दम्भकै कारण बनेका ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए।
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न कनिष्टलाई नियुक्ति गरेकाले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने बताए।
बयलपाटा अस्पतालबारे उनले सरकारले दायित्व लिनुपर्ने बताए। ‘बयलपाटा अस्पताल वैदेशिक सहयोगले ठूलो अस्पताल बन्यो, त्यहाँका नागरिकले निःशुल्क सेवा पाइरहेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, दाताले सहयोग कम गर्न थालेपछि बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसलाई अब पहिलेजस्तै सञ्चालनका लागि सरकारीतर्फबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने मेरो माग हो।’
उनले कोरोनाभन्दा अन्य साधारण रोगबाट नेपालमा धेरै मानिसहरु मर्ने गरेका कारण कोरोनाको नाममा जनतालाई बन्दी बनाउन सरकारले नपाउने बताए।
‘कोरोनाभन्दा पनि साधारण रोगबाट बर्सेनि नेपालमा हजारौंले ज्यान गुमाउँछन्,’ उनले भने, ‘मास्क र सामाजिक दूरी अनिवार्य गरेर लकडाउन र निषेधाज्ञाको तानाशाही प्रवृति हटाउनुपर्छ।’
१९ औं सत्याग्रह